Ithegi: uphawu » Martech Zone
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Imibutho ihlala isebenzisa iifayile zevector ezinelayisensi kwaye ziyafumaneka kwiisayithi zeefoto zesitokhwe. Umceli mngeni uza xa befuna ukuhlaziya ezinye izivumelwano kumbutho ukuze utshatise isitayile kunye nophawu olunxulunyaniswa ne iconography esele ikhutshiwe okanye iisimboli. Ngamanye amaxesha, oku kunokuba ngenxa yengeniso… ngamanye amaxesha abayili abatsha okanye izixhobo zearhente zithatha umxholo kunye nemizamo yoyilo nombutho. Oku kutshanje kwenzeke nathi njengoko siqala ukusebenza
NgeCawa, nge-6 kaJanuwari 2019 NgoLwesine, Meyi 7, 2020 Douglas Karr
Ixesha lokuFunda: 2 imizuzu Indawo enye endingakhange ndiyityale ekutshisweni yile ndawo. Ngelixa iarhente yam yayine logo enkulu endiyithandayo, kwaye sisebenza nabo bonke abathengi bethu kuphawu lwabo, bendingenalo nje ibhendi yokusebenzela kwi Martech Zone uphawu… kude kube namhlanje. Isimboli endala "M" yayisisiseko esenziwe kancinci endisithengileyo ngokungxama emva kokutshintsha idomain. Kwakucacile, kwakungamelanga nto, kwaye
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Abahlobo bam bayathanda ukundinika ixesha elinzima lokuba ngumlandeli we-Apple. Ndinokubeka ityala ngokunyanisekileyo kuyo yonke into kumhlobo olungileyo, uBill Dawson, owandithengela isixhobo sam sokuqala seApple- iAppleTV… wandula ke wasebenza nam kwinkampani apho sasingabaphathi bemveliso bokuqala ukusebenzisa iiMacBook Pros. Kudala ndingumlandeli ukusukela ngoku kwaye, ngaphandle kweKhaya lasekhaya kunye neSikhululo senqwelomoya, ndinaso sonke isixhobo esinye.
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Phantse kwinyanga ephelileyo, kuye kwafuneka ukuba ndithathe inxaxheba kwintlanganiso yokucinga yomthengi. Kwakumnandi, ukusebenza nomcebisi owaziwayo ngokuphuhlisa iimephu zeendlela zeenkampani zobuchwephesha. Njengoko iimephu zendlela zaziphuhliswa, ndachukumiseka ziindlela ezizodwa ezahlukileyo ezafika nazo iqela. Nangona kunjalo, bendizimisele ukugcina iqela lijolise kwintengiso ekujoliswe kuyo. Ubuchule sisicwangciso esiliqili kumashishini amaninzi namhlanje, kodwa
NgoLwesihlanu, ngoJuni 1, 2018 UTara Kelly
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu U-Alexa, umncedisi wabucala onikwe amandla lilizwi eAmazon, unokuqhuba ngaphezulu kwe- $ 10 yezigidigidi kwingeniso kwiminyaka nje embalwa. Kwasekuqaleni kukaJanuwari, uGoogle wathi uthengise ngaphezulu kwezigidi ezi-6 zezixhobo zeKhaya kuGoogle ukusukela phakathi ku-Okthobha. Iibhothi ezincedisayo ezinje nge-Alexa kunye ne-Google kaGoogle ziba yinto ebalulekileyo kubomi beli xesha, kwaye oko kunika ithuba elimangalisayo lokuba iimveliso zinxibelelane nabathengi kwiqonga elitsha. Ukulangazelela ukwamkela elo thuba, iimveliso ziyangxama